Neckerchief - ကဆွဲဆောင်မှုနှင့်လက်တွေ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကတင့်တယ်နိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝတ်စုံကို တစ်ဦးထက်ပိုသောဒီမိုကရေစီပုံစံနှင့်ဝတ်စားဆင်ယင်။ ထို့အပြင်လူတို့ရှည်လျားလည်ပင်းပတ်လည်ပဝါကအရမ်း sexy ကြည့်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
လည်ပင်း scarves အပေါ်ပုံစံများ
မိမိလည်ပင်းကိုပတ်ပတ်လည်တစ်လက်ကိုင်ပဝါ၏စံအရွယ်အစား - 60 စင်တီမီတာမှ 40 စင်တီမီတာ, သို့သော်ယခု 40 မှ 70 စင်တီမီတာကနေလည်ပင်းအရွယ်အစားန်းကျင်ဖက်ရှင်စတုရန်း scarves စဉ်းစား .. သူတို့ဟာဒါပေမယ့်လည်းဦးခေါင်း, ခါးနှင့်တောင်အိတ်ပေါ်တွင်လည်ပင်းမှချည်ထားသောမသာ။ ဤသည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းလှလှပပအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူအလှဆင်သည်သူမ၏ပုံရိပ်ပိုပြီးသန့်စင်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောပါစေ။
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ scarves ၏အရွယ်အစားအပြင်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသဘာဝပိတ်ထည်, အများအားဖြင့်ပိုးကနေသီးသန့်လုပ်နေကြသည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါလက်ကိုင်ပဝါပစ္စည်းများအတွက်အဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါ:
ပိုးပစ္စည်းအဖြစ်ကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုမကြာခဏအသုံးပြုသည်, က hardwearing အလွန်လက်တွေ့ကျသည်နှင့်တစ်ဦး shawl နှင့်ဇိမ်ခံ၏တစ်ဖွဲ့လုံးလမ်းကထပ်ပြောသည်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရောင်ရှိပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာ, ပိုးပဝါအေးမြသင်၏လည်ပင်းအတွက်အေးမြခြင်းနှင့်နွေးထွေးသောသငျသညျကိုငါပေးမည်။
တစ်ဦးအရေးကြီးသောအနည်းငယ်နှင့် shawl အပေါ်ဆွဲဘူး။ ကျယ်ပြန့်ဘောင်တစ်ခုအဆင်တန်ဆာ, ဒါမှမဟုတ်ခေတ်သစ် - ဒါဟာဂန္ဖြစ်နိုင်သည်။ မြင်းကျားနှင့်ကျားသစ် - လည်ပင်းမှာဖက်ရှင် shawls နှင့် scarves မကြာသေးမီကကြောင့်တိရစ္ဆာန်ပုံနှိပ်ခဲ့သည့်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှသက်ဆိုင်ရာဆွဲနေကြသည်။ အမြဲအမှတ်တံဆိပ်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အတူအလှဆင်သက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်ပစ္စည်း, ထုတ်လုပ်သူများ၏လက်ကိုင်ပဝါမီးခြစ်ကော်ပိုရိတ်အရောင်၏အဓိကအရောင်ရှိခဲ့သည်။
မိန်းမတို့အဘို့မိမိလည်ပင်းကိုပတ်ပတ်လည်လှပသော shawls ယောက်ျားမှသူတို့ကိုခွဲခြားကားအဘယ်သို့ကြောင်းအလွန်ရှားပါး monophonic ဖြစ်ကြသည်။ အအောင်မြင်ဆုံးအမျိုးသမီးပုံစံများပန်းပွင့်, ပြင်သစ်သခွားသီး, စိတ္တဇသို့မဟုတ်ဂျီဩမေတြီပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ်။ ပန်းပွင့်၏ကြွယ်ဝခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောဆက်စပ်ပစ္စည်းဆင်ယင်ခြယ်သ။ အတော်များများကလူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီများသည်ကမ္ဘာအနှံ့ဖက်ရှင်ကအသိအမှတ်ပြုသောလိုဂိုပုံစံနှင့်အတူ scarves ထုတ်လုပ်ရန်။ တစ်ဦးကဒီကဗျာဥပမာကျော်ကြား Burberry အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည် - တစ်ဦးညိုနောက်ခံပေါ်တွင်အနက်ရောင်အဖြူနှင့်အနီရောင်ကလာပ်စည်းလူတိုင်းနီးပါးမှလူသိများသည်။
သီးခြားစီပါကအာရပ်ယောက်ျားထံမှလည်ပင်းမှာအမြိုးသမီးမြားရဲ့နွေရာသီ scarves အကြောင်းကိုဆိုပါတယ်ရပါမည်။ သူတို့ကတစ်ဦးကွက်ပုံစံမကြာခဏအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်၌၎င်း, အနားပတ်လည်မြိတ်ရှိသည်။ လူတိုင်းမယ့်ပဝါ၏နာမကိုအဘယ်သူသိနိုင်သနည်း ဒါဟာ arafatka ။ ဒါဟာနွေဦးပေါက်ရာသီနဲ့နွေရာသီများတွင်လူငယ်များအကြားရေပန်းစားသည်။ Arafatka တစ်ဦးတီရှပ်, အလင်းဂျာကင်အင်္ကျီ, ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူအကြီးလှပါတယ်။
တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို ဖက်ရှင်ပဝါ လည်ပင်းပေါ်?
ပဝါ - ကြော့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အခြေခံမတ်မတ်မှကိုက်ညီရန်လိုအပ်ပါသည်ဒါ။ တစ်ပုဝါရွေးချယ်ရာတွင်၌လူအပေါင်းတို့အားအလွန်အရေးပါသည်:
အပြင်ကသူမ၏အင်္ကျီများနှင့်အဝတ်အစားစတိုင်လ်၏ဖြတ်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပေသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝတ်စုံကိုသို့မဟုတ်ဂန္ရင်ခွင်အဘို့အကျောခိုင်းထားသောအရောင်များနှင့်အတူငယ်တစ်ခုပဝါကိုရှေးခယျြနှင့်ပြင်သစ်ထုံးချည်နှောင် သာ. ကောင်း၏။ တင်းကျပ်စွာသင်၏လည်ပင်းပတ်လည်ပဝါကိုကြိုးနဲ့တုတ်ပြီးသပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးကိုအခြမ်းကိုကြိုးနဲ့တုတ်, ထို့နောက်သင့်ရဲ့ image ကိုပြင်သစ်စင်နှင့်ဇိမ်ခံအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအရေးပါသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးမှာပုဝါဝတ်ဆင်ချင်လျှင်, တစ်စတုရန်းထုံးအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းချည်နှောင်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပုံစံနေသမျှကာလပတ်လုံးအရောင်သင်၏မျက်စိနှင့်ဆံပင်ဆီသို့ရောက် လာ. , အဖြစ်လုံးဝဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါ။ နှစ်ထပ်ကိန်းထုံးများအတွက်ရှည်လျားကျဉ်းမြောင်းသော scarves ရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ ထိုမင်းသည်တစ်ဦး V-လည်ပင်းနှင့်အတူပိုကောင်းလှပါတယ်။
ပိုပြီးဒီမိုကရေစီအဝတ်တစ်တြိဂံပဝါကောက်နှင့်တစ်ဦးကောင်းဘွိုင်စတိုင်ကချည်နှောင်သင့်တယ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်တစ်ဦးဂျာကင်အင်္ကျီသို့မဟုတ်အင်္ကျီပေါ် cutout ဆီလျှော်သည်။ သင်တစ်ဦးအင်္ကျီသို့မဟုတ်ဂျာကင်အင်္ကျီပေါ်တွင်တင်လျှင်, ထိုဆက်စပ်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ရိပ်ပေါ့ပါးသို့မဟုတ်မဲမှောင်ဖြစ်သင့်သည်။ ပဝါမဟုတ်ရင်ကစားဆင်ယင်နဲ့အညီဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, အရောင်အတွက်လွန်းတောက်ပသို့မဟုတ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောမဖြစ်သင့်, ထိုသို့ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်အသေးစိတ်စာရေးနှင့်အတူအမှုအရာအားဖြင့်လက်ကိုင်ပဝါပေါင်းစပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အယူခံဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
ထိုးပြီးအိတ် - အရှိဆုံးစတိုင်မော်ဒယ်များနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့နှင့်အတူဝတ်ဆင်နည်း
ဆံပင်အဘို့အတစ်သင်းလုံးကကစားသမား - ဝတ်ဆင်ဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကိုဆံပင်,
လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီး - အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လို?
Quince ဗော့ဒ်ကာ Tincture
ကလေးများသနားခြင်းကရုဏာအဘို့တောင်းပန်ရန်ရှိသည်သူကို 20 tots obizhulka!
နွေရာသီအတွက်မျိုးပွား Honeysuckle ရှ
အသစ်ကဆံပင် Gigi Hadid မှကျေးဇူးတင်ပါသည်တစ်ဦးဂျစ် Bardot ဖြစ်လာခဲ့သည်
Trental - Analogues
ဇီဝဖြစ်စဉ်အစားအသောက် - အသီးအသီးနေ့အဘို့ menu ကို
Polenta - စာရွက်
Creatine monohydrate: ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအဘို့အဝတ်စားဆင်ယင် - ဖက်ရှင်နွေရာသီ 2016
ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်းဟာ Spice Girls အားမိမိပြန်လာရှင်းပြနှင့်နည်းလမ်းသစ်တွေနဲ့အလိုရှိခဲ့ကြ